Madaxweyne Faroole oo Gaaray Bosaaso Kana Jawaabay Warbixinti Qaramada Midoobay(Sawiro) • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Madaxweyne Faroole oo Gaaray Bosaaso Kana Jawaabay Warbixinti Qaramada Midoobay(Sawiro)
Waxaa maanta soo gaaray magaalada Bosaso Wafdi uu hogaaminayo Madaxweynaha Puntland Dr.Cabdiraxman Maxamed Faroole, oo kasoo kicitimay magaalada Qardho ee xarunta gobalka Karkaar.
Madaxweynaha Puntland ayaa waxaa safarkiisa ku wehliyey qaar kamid ah Wasiirada xukuumada Puntland oo ay kamid yihiin Wasiirka Amniga Gen.Yusuf Ahmed Khayr, Wasiirka Waxbarashada Cabdi Farax Juxa, Wasiirka Duurjoogta Cabdiqani Yusuf iyo xubno kale.
Mar uu Madaxweynaha ka hadlaayay arimaha Amaanka wuxuu sheegay in maalmihi lasoo dhaafay ay Amaanka degaanada Puntland gaar ahaan magaalada Bosaaso ay ahayd mid aad u wanaagsan.
”Furaha Amaanka waa Bulshada iyo Shacabka Reer Bosaaso, waa in laga Shaqeeya oo gacan la siiya Ciidanka Amaanka si ay u sugaan Amniga”, ayuu ugu baaqay Shacabka ku dhaqan magaalada Bosaaso.
Wuxuuna sheegay in Ciidanka ay maalmahaan dadaal ugu jiraan wax ka qabashada falalka amaan darada ka jiray Bosaaso.
Sidoo kale wuxuu sheegay in ay Maamulkiisa ka shaqayn doonaan oo ay wax ka qaban doonaan arimaha Amaanka, ugana baaqay Shacabka in ay gacan ka geystaan dadaalkaasi ay xukuumadu wado.
Madaxweynaha Puntland Dr.Faroole oo lagu soo dhaweeyey magaalada Bosaso ayaa shir jaraa’iid ku qabtay Madaxtooyada Bosaso kaga hadlay arrimaha Amniga iyo Burcad badeeda.
Warbixintii Burcad Badeeda
Madaxweyne Faroole ayaa shirkiisa Jaraa’iid eed weyn dusha uga tuuray hay’ada International Monitoring Group, ee Qaramada Midoobay oo dhawaan warbixin ku aadan burcad badeeda kasoo saartay deegaanada Puntland
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in war been ah oo aan sal iyo raadlaheyn ka tabiyeen dhulka Puntland, hay’adaasi iyo shaqsiyaad la xariira, asagoo sheegay in Puntland ay tahay mid la dagaalantay Burcad badeeda isla markaana xabsiga dhigtay burcad badeed gaareysa 264.
Wuxuu sheegay Madaxweynaha Puntland oo si qoto dheer uga hadlay arrimaha burcad badeeda iyo warbixintii dhawaan loo gudbiyey Qaramada Midoobay ayaa sheegay in Puntland baaritaan ku sameyn doonto dadkii falalkaasi been abuurka ah ka sameeyey deegaanada Puntland, wuxuuna Madaxweynaha Puntland ugu baaqay beesha Caalamka in dadka falalkaasi been abuurka ah tabiyey ay wax ka qabtaan.
Madaxweyne Faroole ayaa ku tilmaamay xubno salka ku haya siyaasad inay warbixintan ka qeyb qaateen oo wararkan faafiyeen, asagoona sheegay in warbixintan lasoo saaray ayadoo aan Puntland la imaan oo wax baaritaan ah la sameyn.
Wuxuu Madaxweyne Faroole ku nuux nuuxsaday in ay la yaab tahay in warbixintan lagu tilmaamo in Somaliland iyo Dowlada Fedraalka laga caawiyo arrimaha Burcad badeeda, halka Puntland la eedeeyey, asagoo sheegay in labadaas maamul aysan wax weyn ka qaban karin burcad badeeda, marka laga reebo dad kooban oo ay Somaliland sheegtay inay xir xirtay, halka Dowlada Federaalka aysan waxna gacanta ku hayn.
Dr.Faroole ayaa sidoo kale sheegay in warbixintan ay ku tuhunsan yihiin inuu lug weyn ku leeyahay Wasiirka Kaluumeysiga ee Dowlada Federaalka Soomaaliya, oo hada kahor warar noocaan ah ka gudbiyey Puntland iyo xubno uu ku tilmaamay inay ku shaqeystaan hay’ado kala gedisan.
Madaxweynaha Puntland ayaa shalay safar ugasoo ambabaxay magaalada caasimada ah ee Garowe, asagoo magaalada Qardho kusoo hakaday xalayna ku hoyday, halkaasi oo la sheegay in kulamo uu kula yeeshay odayaasha iyo waliba xubno kamid ah Dowlada Puntland oo halkaasi ku sugayey, asagoona maanta usoo gudbay magaalada Bosaso.